Nhau - Maitiro ekuchengetedza nekugadzirisa crawler bulldozer chassis
Bulldozer spare zvikamu
Excavator kupembedza zvikamu
Sprocket Chikamu Chikamu
Mberi Idler Boka
Nzira yekuchengetedza nekugadzirisa crawler bhurldozer chassis
Crawler bulldozer chinhu chakakosha michina yekubatsira mune yekuchera tekinoroji. Mines parizvino inoshandisa zvigadzirwa zvakaita seKomatsu Caterpillar. Iyo yegore yepasi pekutakura zvikamu zvekuchengetedza mutengo weaya anokambaira mabhurldozer anoverengera nezve 60% yehuwandu hwekuchengetedza mutengo. -sales service yakanyanya kukosha.Iinotevera inongedzo ipfupi kune yekuchengetedza uye manejimendi yegurldozer chassis system
Chassis yeanokambaira bulldozer ine track shangu, cheni yekubatana, track roller, idler, tension-cylinder, chinokambaira furemu, dhiraivha dhiraivhu, bhalansi danda, yepakati pivot uye yavo inowirirana inosanganiswa zvikamu.
2.Wear chinhu chechassis
Iko kusakara kwechassis kunonyanya kutemerwa nezvitatu zvinhu: iyo yepasi mamiriro inosangana ne chassis, kumhanya kwemidziyo kufamba uye mutoro wemidziyo .Izvi chete zvinhu zvitatu zvinoguta zvachose, kugona kunokonzeresa kupfeka uye kubvarura chassis.
Chassis yezvinhu zvakasakara inogona kupfupikiswa zvakare, inogona kudzora maficha, kusanganisira track cheni kuomesa kugadzirisa, hupamhi hwezvikamu (inogona kusarudza), yekumhanyisa yekufambisa kumhanya uye chinhambwe, chassis inofambisa zvikamu zvinopfeka degree rekudyidzana pamwe uye lubrication mamiriro, iko kushandiswa kweiyo steering system, chassis uye kutsvedza pasi, uye hunyanzvi hwekushandisa mutyairi, nezvimwe zvisingadzoreke zvinhu, zvinosanganisira izvo zvinhu zvakabatana nechassis, iro rinokanganisa mutoro rakaumbwa nezvinhu panguva yekufamba, kuumbwa kwechassis pamusoro kubatanidzwa uye hunyoro hwevhu, nezvimwe.
Caterpillar bulldozer seriers yeD9, D10 uye D11 yekushandisa cheni chisimbiso chisimbi chesimbi, kuiswa kwayo kwakanaka kwazvo, kupfeka hupenyu hweinenge 4000H.Pedyo ne4000H, chisimbiso chakatanga kudonha mafuta, zvichikonzera kupesana kwakaoma kune yekubatanidza pini. hupenyu hwechassis, zvisungo zvekubatanidza zvinofanirwa kutsiviwa padyo ne4000H iri kushandiswa.
Hupenyu hwepakati pechisimbiso cheiyi link ndeye 4000H, asi hupenyu hweiyo link hunosiyana zvichienderana nekushandisa uye nepamusoro. Muchokwadi, hupenyu hweiyo link ndeye 3000-5000h.Kana iyo michina ichishanda zvisirizvo uye ichifamba madaro marefu kazhinji, hupenyu hwechisimbiso chisungo chinodzikiswa.Kuti uwedzere hupenyu hwebasa reketani yekubatanidza, mushure mehupenyu hwebasa. inodarika 3000H, chisimbiso chinofanira kuongororwa kazhinji kuti chibude. Kana iko kuburitswa kwawanikwa, chisimbiso chose checheni chinongedzo chinofanira kuchinjwa nekukasira. Panguva imwecheteyo, ruoko rwekubatanidza pini runofanira kuongororwa kuti rukuvadze here, zvikasadaro pini yeketani, pini ruoko, ketani yekubatanidza ichakurumidza kubviswa.
Kureba kwetambo dzese dzeshangu kunofanirwa kunge kuchingoenderana, kuitira kuti kushanda kwemuviri wese wemotokari kuve kwakadzikama, kufamba kwekudengenyeka kwadzikira, uye hupenyu hwebasa rekuisa chisimbiso uye kupfeka-kuramba zvikamu kunovandudzwa. ndiro inosvika kana iri pasi pe100% yemutengo unobvumidzwa (ndokuti, kukwirira kwemidzi yetirakiti ndiro 38mm), shangu dzerwendo dzinofanirwa kubviswa nekugadziriswa. Kana iyo degree yekupfeka ikapfuura 120% yeiyo inobvumidzwa kukosha (iyo kukwirira kwemidzi ingori 25.5mm chete), iyo track plate haina kukosha kwekugadzirisa.
Izvo zvipenga zvikamu zvefuremu zvinosanganisira: track roller, idler, inotakura roller, sprocket uye tensioning cylinders uye zvimwe zvinofamba zvikamu.Kuti zvikamu zvinofamba izvi zvinowanzo cherekedza kufamba kwemamiriro acho, 2000H yega yekutarisa mabhaudhi ekusunga echikamu chimwe nechimwe che mamiriro ekuomesa, kutsiviwa kwehuremu hwevhiri unilateral uye mbiri mbiri, 2500H yega pini yemotokari pini girisi. inozadzisa 100% yeiyo inobvumidzwa kukosha), kureva kuti, iyo yekupfeka huwandu inofanirwa kutsiviwa nenguva iyo 32.5mm, uye zvakakosha zvikuru kusarudza yepamusoro-magumo hunhu uye yakanaka mushure-yekutengesa sevhisi kuburitsa undercarriage mugadziri.
Zvigadzirwa zvedu nemhinduro zvinotumirwa kuEurope, United States, Russia, Britain, France, Australia, Middle East, South America, Africa, Southeast Asia nedzimwe nyika nematunhu.Mhinduro dzedu dzinonyanya kuzivikanwa nevatengi pasirese. kambani yakazvipira kuramba ichivandudza mashandiro eedu manejimendi sisitimu yekuwedzera kugutsikana kwevatengi Tinotarisira nemoyo wese kushanda pamwe nevatengi vedu kugadzira win-kuhwina future.Tinogamuchirwa kuti ubatane nesu!
Post nguva: Gumiguru-13-2021
© Copyright 2021: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Kubereka Track Roller, Rubha Track Rollers, Yakakwirira Simba Bolt, Yakapetwa Biri, Excavator Bucket Kucheka Edge, Excavator Bucket Wear Zvikamu,